विज्ञापनले आफ्नो उपवास तोडेको भन्दै म्याकडोनाल्ड विरुद्ध मुद्दा ! - टि. एल. एन पोस्ट
Home अनौठो कुरा विज्ञापनले आफ्नो उपवास तोडेको भन्दै म्याकडोनाल्ड विरुद्ध मुद्दा !
विज्ञापनले आफ्नो उपवास तोडेको भन्दै म्याकडोनाल्ड विरुद्ध मुद्दा !
मानिसका दु:ख पनि अनेक खालका हुन्छन् । धर्मशास्त्रहरुमा सुन्दर परीहरुले ऋषिमुनिहरुको ध्यान भंग गरेका सन्दर्भ पढ्न पाइन्छ । संसारकै ठूलो मुलुक रुसमा भने म्याकडोनाल्ड कम्पनीको बर्गरको एउटा विज्ञापनले एकजना महिलाको धार्मिक उपवास नै तोडिदिएको छ ।
वास्तवमा फास्टफुडका विज्ञापनहरु कतिपय मानिसहरुको मन जित्न वा लोभ्याउन पर्याप्त हुन्छन् । सोसल मिडियामा आउने खानेकुराका तस्वीर तथा भिडियो हेरेरै धेरै मानिसहरु मुख मिठ्याउन थाल्दछन् र अनलाइनबाट यस्ता खानेकुरा मगाइ हाल्छन् ।
वास्तवमा ती रुसी महिलालाई पनि यस्तै भएको छ । बर्गरको लोभलाग्दो विज्ञापनका कारण आफुले मन थाम्न नसकेको र आफ्नो धार्मिक उपवास तोडिएको भन्दै ती महिलाले म्याकडोनाल्ड विरुद्ध मुद्दा हालेकी छिन् ।
म्याकडोनाल्डको यस्तो कार्य उपभोक्ता संरक्षण कानूनको उल्लंघन रहेको भन्दै उनले यस विषयमा छानविन गर्न पनि अदालतसँग माग गरेकी छिन् ।
क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको धार्मिक पर्व लेन्टका अवसरमा उनले उपवास बसेकी थिइन् । तर ठूलो ब्यानरमा राखिएको म्याकडोनाल्डको विज्ञापनबाट लोभिँदा उनले बर्गर खान बाध्य भइन् र उनको उपवास जबर्जस्ती तोडियो ।
ती महिलाको नाम कसेनिया ओभचिन्निकोभा हो । पछिल्लो १६ वर्षदेखि उनले नियमित रुपमा लेन्ट पर्वका बेला पूरै एक महिनासम्म उपवास बस्ने गर्दथिन् । तर चिकेन नगेट सहितको म्याकडोनाल्डको चिजबर्गरको विज्ञापनका कारण उनले यो पटक मन थाम्न सकिनन् र नजिकैको म्याकडोनाल्डको आउटलेटमा गएर त्यो बर्गर किनेर खाइहालिन् । जसका कारण उनको उपवास भंग भयो ।
म्याक डोनाल्ड विरुद्ध मुद्दा हालेकी ती महिलाले म्याकडोनाल्डसँग जम्मा १४ डलर अर्थात् रुसी रुबल १ हजार क्षतिपूर्तिको माग गरेकी छिन् ।
उनको उक्त मुद्दामा अदालतले सुनुवाई गर्न बाँकी नै छ ।
Previous articleसानिमा लाइफको आईपीओ २४ लाख १९ हजारले भरे, १९ लाखको हात खाली हुने
Next articleमैलुङ खोला जलविद्युतको आइपीओ बाँफाँड हुने मिति तय
गायक प्रमोद खरेलले दोस्रोपटक जिते कोरोना
नेपालसँग टाउको झुकाउन तयार छौं : भारतका रक्षामन्त्री सिंह
तेह्रथुम पावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन